BONGON’I JAIKY AMBILO : Mibaribary ny fitongilanan’ny Harena an-kibon’ny tany
Nihetsika indray ny resaka ady fatana ao Ambilo Betsiaka distrikan’Ambilobe. Raha tsiahivina dia ahitana ady fatana ny ao amin’ny bongon’i Jaiky ao Ambilo. Fifanatonan’ny fangadiana tany avy amin’ny vavam-patana 505 sy vavampatana 844 no nahatonga ny olana. 14 novembre 2017
Any amin’ny halalin’ny tany mahatratra 80m any ho any no nampifanatona ireo vavam-patana ho an’ny olona roa samy hafa ireo, ka ny fidiran’ny andaniny amin’ny ankilany amin’ny fakana vokatra volamena no miteraka disadisa.
Natsangana ny rindrina manasaraka ny fatana 505 sy 844
Misy araka izany ny fifanolanana eo amin’ny roa tonta, ka nahatonga ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany aty amin’ny Faritra Diana niroso tamin’ny fandaminana mba hamahana ny disadisa. Tapaka tamin’ny fivoriana nataon’ny Omc sy ireo solontenan’ny mpifanandrina isany, izay notarihan’ny préfet eto Antsiranana ny 20 jona 2017 lasa teo, ny fametrahana rindrina mampisaraka ilay faritra izay niteraka olana.
Marihina fa fanalana ny naoty fampiatoana izay navoakan’ny préfet tamin’ny asa tamin’ireo fatana mifanandrina ireo no anton’ity fivoriana voalaza ity. Fanapahan-kevitry ny mpivory ny fananganana rindrina manasaraka ireo fatana roa matetika misy ady ireo, mba hahafahana mametraka filaminana, ka samy afaka miasa amin’ny faritra misy azy ny tsirairay. Izany rehetra izany dia misy taratasy fanamarinana izay misy sary manaporofo nataon’ny vadintany izay nanao fitsirihana tao Ambilo tamin’ny 30 avrily lasa teo.
Tsara marihina fa teo ambany fitarihan’ny vadintany niaraka tamin’ny tale iraisam-
paritra ny harena an-kibon’ny tany aty Antsiranana ny fametrahana ny rindrina, ary natrehan’ireo mpifanandrina roa tonta sy ny vaomieran’ny fatana, ny mpitondra tao an-toerana mba tsy fisian’ny fitongilanana.
Tsy nifanaraka tamin’ny firaketana an-tsoratra ny naoty
Taorian’izany dia efa nisy ny fampihavanana tamin’ny andaniny sy ny ankilany mahakasika ny olana amin’ny fitrandrahana volamena amin’ny bongon’i Jaiky ao Ambilo Betsiaka ity.Ny zava-misy taty aoriana indray dia nisy ny famoahana naoty n° 053/2017-MPMP/SG/DIRREG.D, ny 24 jolay 2017, izay nampiatona indray ny asa fitrandrahana volamena amin’ny fatana 505 sy 844, izay nosoniavin’ny tale iraisam-paritra ny harena ankibon’ny tany Antsiranana.
Tsy vitan’izany naoty fampiatoana ny asa izany ihany fa namoahana naoty hafa koa indray, mitondra ny laharana 160-17/MPMP/SG/DGM, tamin’ny 02 novambra teo, izay nidina avy any Antananarivo nosoniavin’ny tale jeneralin’ny harena ankibon’ny tany sy ny solitany.
Mifanohitra tanteraka tamin’ny firaketana an-tsoratra tamin’ny fivoriana momba ity ady fatana 505 sy 844, izay niarahana tamin’ny Omc taty an-toerana ny voarakitr’ilay naoty avy any amin’ny minisitera. Ity naoty farany dia manala ny fampiatoana ny asa fitrandrahana volamena. Ny zava-misy anefa dia ny fandrodanana ny rindrina izay manasaraka ny mpifanolana, mba hahafahan’ireo avy amin’ny vavampatana 505 manohy ny lalam-bato ary tafiditra hatramin’ilay faritra nahatonga ny disadisa ; fandrarana ihany koa izay asa mety hanelingelina ny fatana 505 ihany ary ny hamiliana amin’ny lalam-bato hafa ho an’ny fatana 844.
Ireo teboka telo voalaza eo ambony ireo no voasoratra mivandravandra ao amin’ilay naoty avy any Antananarivo tamin’ny 2 novambra lasa teo. Marihina fa nandefa fitarainana teo anivon’ny minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany ireo avy amin’ny vavam-patana 844 ny 8 aogositra lasa teo, ary voalaza fa nangataka ny hihaona tamin’ny minisitra voakasika nefa tsy voaray. Ny mba hampanjakana ny fahamarinana avy any ifotony ary mba tsy ho feon-dakolosy tokana no henoina no nanaovan’ireto farany fitarainana. Nampiahiahy ny maro araka izany fivoahan’ny naoty farany ity raha tsy hilaza afa-tsy ny fisian’ny fitongilanana.
Nitongilana amin’ny tompon’ny fatana 505 ny avy amin’ny minisiteran’ny harena an-kibon’ny tany
Tsy fantatra mazava tsara ny ao ambadik’izao ady fatana izao fa toa misy fitongilanana ny eo anivon’ny minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany, raha io naoty nivoaka farany ity no asian-teny. Manahy ny mety ho fisian’ireo besandry ho mitsabaka amin’izany. Ankoatra izany dia mampanontany ihany koa ny hoe "fehezan-dalàna nalaina avy aiza ity fanapahan-kevitra noraisin’ireo avy amin’ny minisitera ny harena ankibon’ny tany, nahafahan’izy ireo namoaka io naoty voalaza eo ambony io ? Avy tamin’ny lalàna mifehy ny fitrandrahana sa nivoaka avy aiza ?
Satria dia fantatra fa mifanohitra tanteraka izay voalazan’ ny Dina ao amin’ny Toko IV andininy faha-39 sy faha-40. Marihina fa misy ny Dina mifehy ny fiasana volamena ao anatin’ny kaominina Betsiaka, natao tamin’ny daty 2 janoary 2013. Izany Dina izany dia ara-dalàna izay voatokana raha ny resaka fitrandrahana volamena ao Ambilo Betsiaka izay ara-dalàna, nefa ohatra ny voadingana izany fa tena mibaribary ny fitongilanana.
Mbola tsy teo amin’ny fitondrana ireo mpitondra ankehitriny no efa teraka ny Dina. Anisany mampiahiahy ny mpanara-baovao ity ady fatana misy eo amin’ny vavam-patana 505 sy 844 ao amin’ny bongon’i Jaiky ity. Lasa nitongilana any amin’ny 505 ny avy amin’ny Harena ankibon’ny tany. Azo heverina fa matoa misy ny fitsirihana nataon’ny vadintany, niafara tamin’ny fametrahana rindrina manasaraka ny andaniny sy ankilany teo anatrehan’ny mpifanandrina roa tonta, mba hisian’ny filaminana nataon’ireo avy amin’ny Omc aty an-toerana dia azo ambara fa ao ihany ny antony nahatonga izany. Nifanohitra tanteraka anefa ny zava-misy avy any Antananarivo raha nidina ifotony ka ny andaniny ihany no niaraka tamin’izy ireo nanao fitsirihana, izay azo adika fa nisy ny tsindry bokotra. Manontany tena araka izany ny mpanara-baovao fa iza marina ny mpanararaotra ao ambadik’ity ady fatana ao amin’ny bongon’i Jaiky ity. Marihina fa ireo fatana miady ireo dia voalaza fa efa nahazoam-bokatra roapolo kilao nisesisesy.
Ahiana araka izany ny mety hisian’ny mpanararaotra ao ambadik’izao raharaha izao. Fantatra fa anisany mpiaro izay manana ny marina voatsindry Itompokolahy Zafy Albert, ny raha misy anefa mbola tsy ampy volana iray ny nahafatesany dia efa naneho vangy ireo mpanararaotra nisisika hitady ny tombontsoany manokana, raha ny tranga misy no ambara.
Ahiana hiteraka korontana ny toe-draharaha
Manoloana ny zava-misy kosa indray dia tsy hanaiky tsotra amin’izao ny fokonolona ao Ambilo ary ahiana ny mety hisian’ny korontana. Mahita izy ireo fa toa natao tsinontsinona ny voalazan’ny dina mikasika ny fitrandrahana volamena ao Betsiaka. Matetika anefa raha misy disadisa tahaka izao dia mibaribary avy hatrany ny fampiasana hery amin’ny endriny samihafa ataon’izay mahitahita na dia tsy manana ny marina aza. Efa tsy lazaina ihany koa ny fanamparam-pahefana sy fisehosehoana amin’ny fahalalana olona ambony, raha amin’ny resaka ady fatana ao Ambilo no resahina.
Tsy vitsy ihany koa ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny faritra, distrika, kaominina izay efa nesorina tamin’ny toerany mahakasika ny raharaha volamena ao amin’ny faritra Betsiaka. Ny mahavariana ny mpitazana anefa dia tsy arakaraka ny fivoahan’ny volamena ao Betsiaka sy ny manodidina ny fampandrosoana misy ao anatin’ity tanàna manan-karena volamena an-taonina maro ity. Azo lazaina araka izanyfa misy ny fitantanana gaboraraka ka tsy voafaritra mazava ihany koa ireo vokatra volamena mivoaka avy ao Betsiaka.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1938) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021